December 2019 – Page2– Mawlamyine Daily
ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ရက္ေန႔ ျမန္မာက်ပ္ေငြေၾကးလဲလွယ္ ေစ်းနႈန္းမ်ား
Mawlamyine Daily	စီးပြားေရး, ျမန္မာက်ပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကး လဲလွယ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား	Leaveacomment December 30, 2019 1 Minute
ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ရက်နေ့ ရွှေဈေးနှုန်း
Mawlamyine Daily	စီးပြားေရး, ေရႊေစ်း	Leaveacomment December 30, 2019 1 Minute
ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ရက်နေ့ စက်သုံးဆီစျေးနှုန်းများ
Mawlamyine Daily	စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း, စီးပြားေရး	Leaveacomment December 30, 2019 1 Minute
ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ရက်နေ့ မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
မော်လမြိုင်၊ ၃၀ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၉ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အ‌ခြေအနေ။ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့တွင် တိမ်အနည်းငယ်မှ တိမ်အသင့်အတင့် ဖြစ်ထွန်းနေပါသည်။ မနက်ဖြန်နံနက်အထိခန့်မှန်းချက်။ နေပြည်တော်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကွက်ကျား မိုးအနည်းငယ် ရွာနိုင်ပါသည်။ ရွာရန်ရာနှုန်း(၆၀) ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တို့တွင် တိမ်အသင့်အတင့် ဖြစ်ထွန်းမည်။ မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်။ လှိုင်းအသင့်အတင့်ရှိမည်။ လှိုင်းအမြင့်မှာ မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် (၅)ပေမှ (၇)ပေခန့် ရှိနိုင်ပါသည်။ နောက်(၂)ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်။ နေပြည်တော်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင် မိုးရွာနိုင်ပါသည်။ နေပြည်တော်နှင့်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်နံနက်အထိခန့်မှန်းချက်။ နေရာကွက်ကျား မိုးအနည်းငယ် ရွာနိုင်ပါသည်။ ရွာရန်ရာနှုန်း(၆၀) ဖြစ်ပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့နှင့်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်နံနက်အထိခန့်မှန်းချက်။ … Continue reading ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ရက်နေ့ မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက် →
Mawlamyine Daily	မိုးေလ၀သ	Leaveacomment December 30, 2019 1 Minute
Mawlamyine Daily ကာတွန်း
မော်လမြိုင်၊ ၃၀ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၉ ကာတွန်း - လူမင္းေအာင္
Mawlamyine Daily	ကာတြန္း, အႏုပညာ, Lifestyle	Leaveacomment December 30, 2019 1 Minute
Night Sweats ညေခြ်းထြက္ျခင္း
ေမာ္လၿမိဳင္၊ ၃၀ ဒီဇငၻာ ၂၀၁၉ စစ္ေဆးသင့္တဲ့ ေရာဂါေတြစာရင္း 1. Overactive Thyroid လည္ပင္းၾကီးေဟာ္မုန္းမ်ားျခင္း၊ 2. Low Blood Sugar ေသြးထဲသၾကားဓါတ္နည္းျခင္း၊ 3. Sleep Apnea အအိပ္မမွန္ျခင္း၊ 4. Acid Reflux အက္စစ္ရည္ အထက္ဆန္ျခင္း၊ 5. Lymphoma လင္ဖိုးမား ကင္ဆာ၊ 6. Medications ေဆးမ်ား (acetaminophen ပါရာစီတေမာ၊ aspirin အက္စ္ပရင္၊ ibuprofen အိုင္ဘူပရိုဖင္၊ tricyclics or TCAs စိတ္မက်ေဆး၊ bupropion and venlafaxine ေဟာ္မုန္းျဖည့္ေဆးမ်ား၊ cortisone and prednisone ေကာ္တီဇုန္းေဆးမ်ား)၊ 7. TB တီဘီ၊ 8. Anxiety … Continue reading Night Sweats ညေခြ်းထြက္ျခင္း →
Mawlamyine Daily	က်န္းမာေရး, ေဆာင္းပါး	Leaveacomment December 30, 2019 1 Minute
ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ရက်နေ့ ရွှေဈေးနှုန်း
Mawlamyine Daily	စီးပြားေရး, ေရႊေစ်း	Leaveacomment December 29, 2019 1 Minute
မော်လမြိုင်၊ ၂၉ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၉ ကာတွန်း - သာဒိုး
Mawlamyine Daily	ကာတြန္း, အႏုပညာ, Lifestyle	Leaveacomment December 29, 2019 December 29, 2019 1 Minute
ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ရက်နေ့ စက်သုံးဆီစျေးနှုန်းများ
Mawlamyine Daily	စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း, စီးပြားေရး	Leaveacomment December 29, 2019 1 Minute
Mawlamyine Daily	ကာတြန္း, အႏုပညာ, Lifestyle	Leaveacomment December 29, 2019 1 Minute